Simone Biles Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Matteo Berrettini Yemwana Nhau uye Untold Biography Chokwadi
Pierre Gasly Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
musha Kanadha vatambi Jim Carrey Zvekuchecheche Nyaya Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Biography yaJim Carrey inokuudza Chokwadi pamusoro pehucheche Nyaya Yake, Hupenyu hwepakutanga, Mhuri, Vabereki, Mukadzi, Vana, Mararamiro, Chitendero, uye Hupenyu Hwega.
Mukupfupisa, isu tinemwe kuongorora kwakazara kwerwendo rwake, kubva pamazuva ake ekutanga kusvika paakatanga mukurumbira.
Iye zvino tarisa zvakanyanya kuti Jim Carrey akawana sei shanduko yekukura muHupenyu hwake uye Rise pikicha pazasi.
Nyaya Yehupenyu yaJim Carrey. Tarisa mufananidzo mufananidzo we Hupenyu uye Kumuka.
Zvakanaka, tingadai takarasikirwa nevaraidzo yakaratidzirwa mukuratidzira kwaJim Carrey dai zvisiri zvekushingirira kwake.
Chokwadi chinotaurirwa, iye ndeimwe IMDB yepamusoro gumi nevashanu veCanada Vatambi uye haana kungowana mukurumbira kubva mukusagadzikana.
Asi, zvibudiriro zvake zvakamuka apo iye akaramba achisundira kune akati wandei mabasa kunyangwe akaramba achiramba muVaraidzo Indasitiri.
Chimwe chidimbu chinotyisa cheruzivo nezve chokwadi chaJim Carrey cheUdiki Nyaya ndeyekuti aifanira kusiya chikoro nekuda kwekushaikwa kwemari.
Verenga paunenge uchikupa iwe nedzimwe nyaya dzinonakidza nezve Biography yaJim Carrey.
Jim Carrey Yemwana Nhau:
Mufananidzo usingawanzoitika wehudiki waJim Carrey.
Kutanga kubva, James Eugene Carrey akazvarwa pazuva re17th raNdira 1962 muNewmarket, Ontario, Canada.
Ndiye wekupedzisira pavana vana vakazvarwa mumubatanidzwa pakati paamai vake, Kathleen muridzi wemba, nababa vake, Percy Carrey accountant pamwe nemuimbi.
Chiratidziro chisingakanganwike chevabereki vaJim Carrey, Kathleen naPercy Carrey.
Murombo Jim Carrey akapfuura nepakati pezviitiko zvakashata uye zvinotonhora mumazuva ake ehudiki. Hupenyu hwakanzwa kusaruramisira kumukomana mudiki uyo asina kuwana zvese zvaaida pamunwe wake.
Nehurombo, yedu celeb yeCanada yakatambura nehurombo hwakaipisisa sezvo mhuri yake yaigara yakatarisana nedambudziko rehupfumi.
Ndeipi mhinduro yaanogona kupa? Aizokwanisa kuzadzisa ramangwana rakajeka here kana kuti zvishuwo zvake zvaizoramba zviri zviroto?
Yese mibvunzo iyi yakamhanya mupfungwa dzaJim sezvo aisakwanisa kana kurarama hupenyu hwakajairwa nevamwe vana.
Jims Carrey Kukura Mazuva:
Sezvo mikana yekuwana hupenyu huri nani ichiita senge isingagoneke, saizvozvowo tariro yaJim yemubatsiri wemagumo inowedzera. Zvisinei zvisingaite kuziva zviroto zvake zvinogona kutaridzika, mukomana mudiki haana kutadza kushinga.
Muchokwadi, pamakore gumi, Jim akashinga akanyorera Carol Burnett achimuudza kuti aive shasha yekuratidzira.
Akaratidza kuti anoda kuti Burnett amufunge nezvekuratidzira kwake - iyo Carol Burnett Show. Zvirinani, akawana fomu fomu kubva kuna Burnett achipindura tsamba dzake dzekutanga.
Unoziva here? Jim Carrey nemukoma wake mukuru vanowanzo shanda pafekitori yematai kwemaawa masere sevashambadzi nevachengeti vapedza chikoro.
Ivo vakakwanisa kuwana mabasa, nekutenda kuna baba vavo avo vaive mushandi muindastiri.
Mhuri yaJim Carrey Kubva:
Pakutanga, zita remhuri yaJim Carrey ndiCarré. Zita iri chiratidzo chakazara cheMhuri Midzi yake, ayo ari eFrance-Canada chizvarwa.
Dzinza raamai vaJim Carrey rine midzi yeIrish, French, neScotland.
Zvisinei neyeKutangira Kwemhuri, wechidiki weCanada akakura aine hunyanzvi hwekutaura uye kunzwisisa Mutauro weChirungu.
Ichokwadi kuti Carrey haaratidze chero chimiro chematauriro kubva kuna amai vake Ethnicity.
Mhuri yaJim Carrey Nhoroondo:
Sezvambotaurwa, Jim Carrey anorumbidzwa kubva kune yepasi-kirasi Yemhuri kumashure. Dambudziko rezvemari rinodzokorodza iro rinopinda mumba make nguva dzose ndeimwe yematambudziko makuru ehudiki hwake.
Chinhu chimwe chakadzidzwa naCarrey kubva kumba kwake nekufamba kwenguva mweya wekusamborega.
Jim Carrey Dzidzo:
Semukomana mudiki, Carrey akapinda Akakomborerwa Trinity Katurike Elementary Chikoro. Mushure mezvo, akaenda kuAgincourt Collegiate Institute mumazuva ake ekutanga muHigh School.
Pasina nguva apedza kunyoresa kuChikoro chake chekutanga chepamusoro, mhuri yaJim Carrey yakatamira kuBurlington, Ontario.
Tarisai, yekutanga dhigirii yedzidzo inopindwa neCanadaan Celeb.
KuBurlington, wechidiki weCanada akanyoresa mune chitsva High Chikoro - Aldershot High Chikoro. Nehurombo, sezvo mamiriro emari emhuri yake akaserera, Carrey akange asina imwe sarudzo kunze kwekusiya chikoro.
Jim Carrey Biography Nyaya:
Mushure mekusiya chikoro, Carrey akaramba achishanda kufekitori yematai. Nehurombo, mhuri yake munguva pfupi yakazoshaya pekugara uye aifanira kugara muVolkswagen van.
Hupenyu hwakave hwakaomera zvakanyanya kuCanada paakatanga kuita mumitambo yekusekesa nguva yega yega yaanovhara kubva kubasa.
Kuona padhuze pekugara kwemhuri yaCarrey isina pekugara.
Neraki, baba vaCarrey nevamwe vese vemhuri yake vakatsigira ake matsva ebasa nzira.
Nekudaro, Jim Carrey akatamira kuToronto kunoteedzera ramangwana rakajeka mune komedhi. MuToronto, akaita nharo mukirabhu yemakwikwi eYuk Yuk.
Jim Carrey Bio - Mugwagwa Kune Mukurumbira Nhau:
Kunyangwe akaisa kuita kwakawanda senge mutambi, Carrey haana kuzikanwa zvakanyanya. Nekudaro, akaora mwoyo zvakakwana uye akapokana nezvaaigona.
Kunze kwekuodzwa mwoyo kwake mukutanga komiki opera, matambudziko emhuri yemhuri yaCarrey akaita kuti zvimuomere kuisa pfungwa pachinangwa chake.
Nhau dzakanaka ndedzekuti, mhuri yaCarrey yakakurumidza kuwana mwero uye pakupedzisira vakatamira mumusha mutsva. Nekuda kweizvozvo, Carrey akawana runyararo rwepfungwa uye akagadziriswazve kurekodha kubudirira muindasitiri yevaraidzo.
Sezvineiwo, akatanga kuwana mari kubva mukuita mushoo dzakasiyana.
Pasina nguva iri kure, Jim Carrey akawana kuzivikanwa kwaRodney Dangerfield, mutambi ane mukurumbira.
Pasina kutambisa nguva, Rodney akasaina Carrey murwendo rwake rwakavhurika ndokumuendesa kuLas Vegas, kwaakawana mukurumbira.
Rodney Dangerfield akaita basa rakakosha muJim Carrey Mugwagwa unoenda Mukurumbira.
Jim Carrey Biography - Kumuka Mukurumbira Nhau:
MuLas Vegas, Jim Carrey akabatana neHollywood uye akatoita mukuratidzira; Manheru paImprov muna 1982.
Achiziva zvakazara kuti anga ave kutowana mukurumbira mukumira-kumusoro kweKomiki, Carrey akaendesa zvimwe zvekutarisa kwake kune indasitiri yemamuvhi.
Wedu comedian wekuCanada akaimbawo mune inozivikanwa inomira-kumusoro komedi kirabhu.
Neraki, muvaki weCanada akaita sarudzo chaiyo yekutarisa pakuita mafirimu. Naizvozvo, mugore ra1994, Carrey akave akakurumbira nekutora chikamu chekutungamira muvhi Ace Ventura: Peeter Detector.
Pasina nguva mushure meizvozvo, akawana imwe ropafadzo yekuratidzira kugona kwake mune The Mask.
Iyo kavha yeimhanzi inozivikanwa yaJim Carrey, The Mask.
Nekukurumidza kumberi kunguva yekunyora iyi Life Life, Jim Carrey, sevamwe vatambi veAmerica-vekuCanada vatambi (Dwayne Johnson) akaita mumabhizimusi anokunda mubairo.
Kutenda kusimba kwake uye kutsunga, Carrey akachinja mararamiro ake kubva pahuswa kuenda munyasha. Vamwe vese, sezvavanotaura, inhoroondo.
Jim Carrey Hukama Hupenyu:
Pazasi pane yakazara ruzivo rweJim Carrey's Rudo-Hupenyu. Verenga pamusoro apo isu tichifumura chokwadi chinonakidza nezvehukama hwake.
Musikana waJim Carrey:
Sezvineiwo, nyeredzi yedu inozivikanwa pasi rese yeHollywood inogona kunge isina kuroora panguva yekunyora iyi Biography.
Nekudaro, iye akadanana asiri pasi pevane gumi nemashanu madzimai kubva pakukwira kwake kuMukurumbira. Jim akadanana naGinger Gonzaga, Natalie Gal, Cathriona White, Jenny McCarthy, naLinda Ronstadt kutaura vashoma.
Yepfupi album yevasikana vaJim Carrey. (LR), Ginger Gonzaga, Natalie Gal, Cathriona White, Jenny McCarthy, naLinda Ronstadt.
Mukadzi waJim Carrey:
Unoziva here?… .Comedian wekuCanada akaroora kaviri. Pakutanga, Jim Carrey akaroora kuComedy Store Mutevedzeri uye aimbove mutambi Melissa Womer.
Jim naMelissa vakasunga pfumo musi we28th waMarch 1987. Zvisinei, vaviri ava vakarambana makore masere mushure mekuroora kwavo.
Sangana nemukadzi wekutanga waJim Carrey, Melissa Womer.
Kashoma gore mushure mekurambana, Carrey achiri kuwana rudo naLauren Holly. Pasina kutambisa nguva, iye naLauren vakaroora munaGunyana 1996.
Nehurombo, imba yavo haina kuramba kusvika gore rimwe chete vasati varambana.
Sangana nemukadzi wechipiri waJim Carrey, Lauren Holly.
Vana vaJim Carrey:
Muhukama hwake hwese hwakawanda, Jim Carrey ane mwana mumwe chete. Kuroora kwake naMelissa Womer kwakapa kuberekwa kwemwanasikana wake mumwe chete, Jane Erin Carrey, musi wa6 Gunyana 1987.
Jane akawanawo mukurumbira nekutora chikamu mu2012 American Idol.
Ona kuti Jane Erin Carrey anotaridzika sei sababa vake.
Hupenyu Hwemhuri hwaJim Carrey:
Isu tese tinoziva kuti mhuri yaCarrey yakapfuura nemumatambudziko akawanda emari Jim asati aona budiriro mune rake basa.
Kunyangwe paine matambudziko, Mhuri yaJim Carrey yagara ichimupa rutsigiro rwakanyanya mukuita kwake basa. Pazasi pane ipfupi nhoroondo yeiye Jim's Household. Verenga pamusoro!
Nezve Amai vaJim Carrey:
Mumwe munhu anga achiwanzochengeta Carrey ndiamai vake. Amai vaJim Carrey, Kathleen (née Oram) aigadzira imba.
Aibata mabasa epamba Carrey nehama dzake vasipo pamba. Carrey aigara achionga nerudo rusina magumo rwaakaratidzwa naamai vake.
Mufananidzo usingawanzoitika wamai vaJim Carrey, Kathleen.
Nezve baba vaJim Carrey:
Kunyangwe isu tichiramba tichipemberera chipo chaCarrey muindasitiri yevaraidzo isu tinofanirwa kupa mbiri kuna baba vake nekubudirira kumutsigira. Kunyangwe pakatarisana nedambudziko rezvemari, baba vaJim Carrey, Percy Carrey, vakayedza kutsigira mutambi anouya.
Percy Carrey aive muimbi uye aka accountant. Akatoshandisa simba rake kuwana basa kuvanakomana vake apo mhuri yake yaive ichizadza muhurombo hwakanyanya.
Sangana naPercy Carrey, baba vedu vekuCanada mutambi uye komiki.
Nezve hama dzaJim Carrey:
Jim Carrey ane vakoma vatatu vakuru, kureva; John Carrey, Patricia Carrey Fournier, naRita Carrey. Mukoma nehanzvadzi dzaCarrey pasina mubvunzo vakamira vakasimba padivi pake kana kuenda kwacho kwaive kwakaoma.
Ivo vese vakashanda pamwechete kuti vaone kuti mhuri yavo inopunyuka mune yavo isingafadzi yemari mamiriro.
Kutenda kuedza kwavo, vekwaCarrey izvozvi vane hupenyu hunofadza uye vanogona parunyararo kuyeuchidza kurwira kwavo kwehupenyu.
Mufananidzo unokanda kumashure waCarrey pamwe nemukoma wake nehanzvadzi.
Vakoma vakakurumbira pakati pehama dzaJim Carrey ndiAlex Trebek naJulie Payette, hama yake yechitatu neyechina, zvichiteerana.
Alex ndiye mutambi ane mukurumbira wechirongwa cheTV Jeopardy nepo Julie ari Gavhuna Mukuru weCanada.
Vanasekuru vaJim Carrey amai vaJohn Oram naBridget Hannah Rita Sheehan. Kune rimwe divi, sekuru vababa vaCarrey naambuya vake vaive François Carré naMaria Louise Angélina Sauvé.
Sezvo pakange paine ruzivo rwushoma kana pasina nezve hupenyu hwehama yake, hazvizivikanwe kuti Carrey ane vazukuru kana babamunini.
Jim Carrey Hupenyu Hwega:
Hatigone kuramba chokwadi chekuti kurera kwaJim Carrey uye ruzivo rweKutanga Hupenyu zvakakanganisa hunhu hwake.
Kunyangwe zvake mavara akasetsa aigona kumutsa kuseka, Jim Carrey ari pasi pasi. Pfungwa yake yekuzvininipisa haigone kusimbiswa zvakanyanya.
Carrey aratidzirawo hunhu hwakarongeka uye hunhu hunoratidza zvizere humbowo hwehunhu hwake hweCapricorn Zodiac.
Kure kure nehurongwa hwehofisi yake, komiki yedu inozivikanwa inowanzoita izvo zvaanoda kuita. Zvekuvaraidza zvaCarrey zvinosanganisira zvinoshungurudza vanhu, kugadzira zviso zvinonakidza, uye kuridza saxophone.
Anoda kuridza saxophone.
Jim Carrey Mararamiro:
Iwe unogona kunge uchizviwana zvakaoma kutenda kuti mukomana mudiki wemumhuri anobva kumhuri ine hurombo akasimuka kukirasi yemamirionea.
Kutokutyisidzira iwe zvakare, Jim Carrey's Net Kukosha panguva yekunyora iyi Biography inofungidzirwa kunge iri mari inokwana yemadhora zana nemakumi masere emadhora.
Dzimba dzaJim Carrey:
Hupfumi hwemutambi wedu wemuCanada waita kuti zvikwanisike kuti aunganidze marudzi akati wandei ehupfumi. Nekudaro, Jim Carrey ane dzimba zhinji dzinodhura uye mota dzekunze.
Pazasi pane mufananidzo weCarrey's $ 13.95 mamirioni Malibu Colony imba yemahombekombe uye mota yake yeMercedes-Benz inoshandurwa inoratidza iro rakapfuma-kirasi Lifestyle yaari kurarama.
Onai imba yake nemota zvakanakisa!
Jim Carrey Untold Chokwadi:
Kuputira Hupenyu Hwehupenyu hwaJim Carrey, heano mashoma chokwadi nezvake izvo zvaizokubatsira iwe kuti unzwisise zveBiography yake.
Chokwadi # 1: Jim Carrey Akashata Rufu Mhosva:
Mumwe weshamwari dzaJim Carrey dzakakurumbira, Cathriona White, akaroora Mark Burton mushure mekurambana kwavo. Nehurombo, White akafa makore mashoma mushure mekuroora kwake. Nekudaro, murume wake, Burton, akamhan'arira Jim Carrey mhosva yekufa.
Burton anotenda kuti Carrey akawana zvisiri pamutemo tsamba yaibatanidzwa mukufa kwaWhite.
Amai vaWhite vakaisawo mhosva isiri pamutemo kuna Carrey vachiti mutambi uyu haana kuzivisa White nezve hutachiona hwake. Uye zvakadaro takabatana zvakanyanya naye pavakanga vachiri kufambidzana.
Mushure mekufamba munzira dzinoverengeka uye nemisangano yakareba yedare, dare rakazorasa nyaya iyi musi wa25 Ndira 2018.
Mushure mekudzingwa basa, magweta kubva kumativi ese akasvika pakubvumirana uye akasimbisa kuti kwaisazove nematare edzimhosva ane chekuita nenyaya iyi.
Chokwadi # 2: Jim Carrey uye Tupac Hushamwari:
Panguva yekusungwa kwaTupac Shakur kumashure kwema1990, Carrey akamunyorera tsamba.
Ndichiri kutaura nezvechinangwa chake chekunyora tsamba, Carrey akatsanangura kuti aida kusimudza mweya waTupac nekuisa kunyemwerera pachiso chake.
Zvishoma zvandinokanganwa, Tupac naJim Carrey vanga vari shamwari dzakanaka muindasitiri yevaraidzo zvisinei nehunyanzvi hwavo.
Chokwadi # 3: Chitendero chaJim Carrey uye maTattoos:
Yedu inozivikanwa yeCanada celeb ndeyeRoma Katurike. Kuzvarwa uye kukurira mukutenda kwechiKristu kwaendesa zvitendero zvaCarrey uye hunhu zvinoenderana nemufambiro wechiKristu.
Hazvishamisi kuti haana kuratidza chero kufarira inking maTatoo paganda rake kubva paAkwira Mukurumbira. Kunyangwe Carrey akakundikana kunyora tattoo paganda rake, Ariana Grande akafarira kuisa inki nyowani paganda rake kumutero.
Chokwadi # 4: Chokwadi chaCarrey nePirates yeCaribbean Movie:
Iye munhu angadai akatamba chinzvimbo chaKaputeni Jack Sparrow ndiJim Carrey. Nehurombo, panguva iyo paakapihwa chinzvimbo chaJack Sparrow, Carrey aive achiri kuita muBruce Wemasimbaose.
Kunyangwe hazvo akarasikirwa nePirates yeCaribbean, Bruce Wemasimbaose akazovewo firimu rakanaka.
Pazasi peiyo wiki ruzivo ruzivo rweJim Carrey. Tafura yacho ichakubatsira iwe kuwana ruzivo nezvake muchidimbu uye zvine mutsindo. Tsvaga pazasi.
Zita rizere: James Eugene Carrey
Nick Zita: Jim Carrey
Zuva rekuzvarwa: 17th January 1962
Nzvimbo yekuzvarirwa: Newmarket, Ontario, Canada
Baba: Percy Carrey
Amai: Kathleen Carrey
Vanun'una: Mukoma - John Carrey.
Masisita - Patricia Carrey Fournier naRita Carrey
Varoora (vakadzi): Melissa Womer naLauren Holly
Vana: Jane erin carrey
Net Worth: $ Miriyoni 180
Hobbies: Zvinogumbura vanhu, kugadzira zviso zvinosetsa, uye kutamba saxophone.
kukwirira: 1.88m - in metres
6 '2 "- netsoka
Zvingave zvisingaite kune chero munhu kuti atende kuti Jim Carrey anozoshanduka kuzoita mamioneya. Zvisinei, chokwadi chekuti Carrey akanamira kune imwe nzira zvisinei nemamiriro emari yemhuri yake zvinoratidza kuti kuenderana kwakakosha.
Kubva kuna Jim Carrey's Nyaya yehudiki uye Biography, takaona kuti kuyedza kudiki kunogona kubatsira kosi yedu murwendo rwehupenyu.
Chekupedzisira, isu tinofanirwa kuve vakatendeka muzvinhu zvidiki uye tine pfungwa yekutungamira uye chinangwa chekuzadzisa zviroto zvedu. Usakanganwa kutitaurira zvaunofunga nezve Jim Carrey's Hupenyu Hupenyu mubhokisi remashoko pazasi.
Zvakare, takave nechokwadi chekuti isu tinotarisa kunze kwekururama uye kurongeka tichiisa iyi Biography. Nekudaro, kana iwe ukawana chero chinhu chinoita senge chisiri chakanaka muchinyorwa chino, nemutsa Taura nesu.